Inn e 605 - Mason Suite
ULaura unezimvo eziyi-137 zezinye iindawo.
ULaura ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
IMadison Suite yethu lelona gumbi lethu likhulu leendwendwe. Eli gumbi linamabali amabini. Ezantsi uya kufumana igumbi lokuhlala elikhulu elinendawo yomlilo, ukutsala isofa yesikhumba kunye nebhafu yabucala epheleleyo. Kumgangatho ongaphezulu kukho iBhedi yeKumkani kunye neBafu ezimbini zaBucala.
Onke amagumbi eendwendwe abonisa oomabonakude, oonomathotholo beAlarm Clock, iiBhafu zaBucala ezigcweleyo, kunye nokuJonga okuhle kwale ndawo. Indlu inegumbi lokuhlala elitofotofo elinendawo yomlilo ngaphakathi endlwini kunye nesithuba esikhulu sokuhlala nokuphumla ngaphandle kwigadi yethu. I-WIFI ifakiwe
Iindwendwe ziyakonwabela igadi epholileyo enomthunzi enemithi neentyatyambo. Ininzi yeendlela zokuhlala ezonwabileyo zokuphumla, ukufunda incwadi, ukonwabela iglasi yewayini kwaye ubaleke emhlabeni.
Eli xabiso lelabantu ababini. Iindwendwe ezongezelelweyo zi $20.00 ngobusuku.
Ifakwe kwindlela yaseRichmond phakathi kwawona makhaya anembali yaseWilliamsburg.
I-Inn e-605 yibhedi entsha kunye nesidlo sakusasa sethu. Yayibizwa ngokuba yiApplewood Colonial. Besixakekile sihlaziya ipropathi. Silusapho olunosapho lweBed & Breakfast iqela. (UBawo, Ntombi kwaye ngoku uMzukulwana) Singabantu bokwenyani ababuk' iindwendwe. Sinebhedi kunye nesidlo sakusasa ngaphesheya kwesitrato kule minyaka ingama-30 idlulileyo.
I-Inn e-605 yibhedi entsha kunye nesidlo sakusasa sethu. Yayibizwa ngokuba yiApplewood Colonial. Besixakekile sihlaziya ipropathi. Silusapho olunosapho lweBed & Breakfast iqela. (U…